Nezvedu - Morsun LED
musha > Morsun Brand
Yakavakirwa muGuangzhou, China, Guangzhou Morun Technology Co, Ltd ndeimwe yekutungamira kwakatungamira mwenje vagadziri uye vatengesi ve Jeep, midhudhudhu nemarori nezvimwe.
Isu tinoteerera ne ISO9001: 2000 Quality Management System Standard. Mazhinji emagetsi edu akatungamirwa ane CE, RoHS uye TUV zvitifiketi zvakabvumidzwa. Isu tine simba reUSL rekushandisa chigadzirwa chekutsvaga & timu yekusimudzira ine zvigadzirwa zvemagetsi, zvemagetsi, zvemafuta uye ezvekuvaka. Isu takadyara mamirioni emadhora mukuvaka iyo otomatiki static-chiratidzo uye isina guruva yekugadzira musangano.
Tiine Manyiminya uye chafariz dhizaini, tiri kutora inotungamira nzvimbo muindastiri ye Jeep akatungamira mwenje, akatungamira mwenje mwenje, akatungamira muswe mwenje, akatungamira mwenje webasa uye akatungamira mwenje mabara nezvimwe. Chigadzirwa chemhando yepamusoro, hunyanzvi, hunyanzvi uye basa revatengi zvakatiita mumwe wevatungamiriri vasina kupokana pasirese mumunda wekuvhenekesa kweLED. Kutakura pfungwa ye "Unhu Hwokutanga, Mutengi Paramount, Kutendeseka uye Innovation" mupfungwa dzedu, kambani yedu yakawana budiriro huru mumakore apfuura.
Vatengi vanogamuchirwa kutenga edu akajairwa zvigadzirwa, kana titumire isu oem zvikumbiro. Iwe uchafadzwa nehunhu hwedu uye mutengo. Ndapota taura nesu zvino!